Nice ejị na ụzọ Nweta E | Save A Train
Home > Train Travel France > Nice ejị na ụzọ Nweta E
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 20/02/2020)
Ihe ka nwere ike ịdị a obere chilly gburugburu a, ma Nice ejị bụ n'aka ọkụ gị elu! The French Riviera emepụta a pụrụ iche omume ebe fọrọ nke nta ka a nde ọbịa si n'ụwa nile enubata Nice. Nice Carnival is one of the kasị mkpa ihe on the French Riviera in the oyi. N'ihi na ihe karịrị a Izu uka abuo, obodo na-akpali ka n'afọ iri na ụma nke ememe. ọchị, asusu, na abụ uri na-echere mgbe a nnukwu na-ewu ewu ememme.
Ịbụ otu n'ime ndị na-kwụ n'ahịrị na Nice ama ala gbara osimiri okirikiri Boulevard, na-eme mkpagharị des Anglais, ịhụ nnukwu Nme nke yi floats; Nke a bụ The Nice ejị na ụzọ esi n'ebe ụgbọ okporo ígwè.
Mere Gaa Nice ejị?
"Ejị bụ ndị kasị ewu ewu na omenala omume a mba nwere ike na-enweta. - Jorde Amado, Brazil bụ onye so dee, 1912 – 2001"
Eleta The French Riviera nwere ike ịbụ na ihe mere n'onwe ya ileta Nice. Ejị bụ otu extra bonus!
Site na nke a oge, anyị na-na-na-akpụ akpụ nke na oyi na anyanwụ bụ ka play. Nke a bụ ezi ngọpụ ijeoma Winter. Na a ọkụ nke na agba mgbe àmà kwa ụbọchị parades na abalị adọkpụ animated site n'elu 1000 dancers na egwú ọ bụla akụkụ nke ụwa.
The họọrọ isiokwu nke afọ a bụ 'King of Cinema’ ('King of Cinema') usọrọ 100th ncheta nke obodo mythical Victorine Studios, mepere 1919 na nke kwadoro amasị nke Brigitte Bardot, François Truffaut, Jacques Tati, Original Mix Allen ma ọ bụ Alfred Hitchcock. na n'elu 1,000 egwú, dancers na odide na-enwe na nke a bụ ihe omume -agaghị Agbaghara.
The Battle nke Okooko osisi
Makwaara dị ka Agha nke Okooko osisi, ọ malitere na 1856, kpọmkwem iji ẹnyene ndị mba ọzọ ọbịa onye nọ na-amalite na-enuga n'ebe ndịda nke France. taa, mmadụ abụọ na nke ọ bụla n'elu mmiri otutu ụfọdụ 20 kilogram nke mimosa na ọhụrụ-ịkpụ okooko osisi n'ime ìgwè mmadụ ahụ ka ha na-eme ha n'ụzọ ndị na-eme mkpagharị des Anglais n'akụkụ azure-acha anụnụ anụnụ oké osimiri nke Mediterranean. Ihe ọzọ mere ka onwe gị ụfọdụ tiketi n'oge ka ị nwere ike nweta onwe gị n'ihu n'usoro oche.
N'ime ememme, gburugburu 100,000 ọhụrụ-ịkpụ okooko osisi na-eji, na ọtụtụ n'ime ha na-ndụ site obodo.
Montpellier na Toulouse Ụgbọ oloko
Nice na Toulouse Ụgbọ oloko
Paris na Toulouse Ụgbọ oloko
Marseille na Toulouse Ụgbọ oloko
Mkpa Ịmata banyere Nice ejị
Nice ejị bụ otu n'ime ndị kasị ochie carnivals na ụwa. Site na-ekpere arụsị ma dị umeala n'obi mmalite ụzọ azụ na narị afọ nke 13, ọ na-a dị ebube, kwa afọ 12-ụbọchị party. Ọ na-agba na dị iche iche ụbọchị (dịghị parades na kaadị maka ihe atụ.) The obodo nke Nice malitere na parades nke floats, n'okporo ámá ihe, na ụlọ na culminates na Mardi Gras n'ụbọchị ikpeazụ. N'okporo ámá nakwa n'ámá ebe parades aga site na-emechi anya n'oge ejị, na mkpa ka ị ịzụta a tiketi inweta ohere. Ọ bụ naanị ndị na-a fancy uwe nweta free ntinye ụfọdụ nke parades. Ònye kwesịrị ihe ngọpụ na-eji ejiji elu na agbanyeghị?
Inweta tiketi ka Nice ejị Ihe
N'ihi na ihe omume ndị na mkpa tiketi, na price ranges si 10 euro guzo 25 euro na ọdụ ila. Lee njikọ n'okpuru ịzụta tiketi.
Tiketi si Ticket Office of Tourism na Congress
5 Eme mkpagharị des Anglais
Njem Office website
Olee otú Iji Nweta na Nice ejị Site Train
E nwere ọtụtụ ụgbọ oloko na-eme ka ụzọ ha na-mma si na ọtụtụ akụkụ nke Europe. Site n'enyemaka nke SaveATrain ị nwere ike nweta tiketi na nkeji na-enweghị mmezi eri! Nice isi ụgbọ okporo ígwè, Nice Ville Train Station, na-dị na etiti obodo. The Nice Ville ụgbọ okporo ígwè bụ isi terminus maka mpaghara na mba njikọ ụgbọ oloko, n'ihi ya, ọ ga-akasị mma iji jide a ụgbọ okporo ígwè ebe a maka ejị. The njem nleta ụlọ ọrụ ozi ndị na ọdụ ụgbọ okporo ígwè pụrụ inye aka ma ọ bụrụ na ị na-eleta Nice maka oge mbụ. Nice Ville ụgbọ okporo ígwè na-emi odude na Avenue Thiers na ọ bụ banyere ihe 20 nkeji ụkwụ si osimiri ma na ndị a ma ama-eme mkpagharị des Anglais ala n'akụkụ Avenue Jean Medecin.
Mgbe Nice ejị?
The Nice ejị na-agba ọsọ maka a full Izu uka abuo ke mbubreyo February na bụ nnukwu Mardi Gras kụọ na South of France. Inwe njikere maka ihe mgbawa nke na agba na music si 17nke nke February ruo mgbe 3Rd nke March.
Ebe a bụ kalenda nke The Nice ejị:
nri ụtụtụ “VIRA wheel”
ọrụ, akwado site na City of Nice na ndị na-ahazi nke Nice ejị, ezubere ego enyere obere ụmụ akwụkwọ na-achọ inwere iji nweta ọzụzụ na isi nri ahia, gụnyere site na Lycée Paul Augier ma ọ bụ na-amụ ọrụ ọzụzụ center.
udu : 90 € / kwa onye (mmanya, mmiri, kọfị gụnyere) – Ọha: silvia.grillo@ville-nice.fr / 04 97 13 41 99
Nice ejị bụ otu ụdị ke ụwa na atụmatụ n'etiti ndị kasị ama nke French Riviera. Na nke ọ bụla n'elu mmiri, costumed ụdị otutu ruo 100.000 okooko osisi na-ekpo ọkụ nke ìgwè mmadụ …
udu: 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B)
Ejị Nme nke ìhè
Na Ebe Masséna, na visual eserese na-diffused na nnukwu meziri … Na mgbede, niile floats na-illuminated, na Corso ghọtakwuo mgbe obi nke Nice.
udu: 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara A)/ 5€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B)
Na Ebe Masséna, na visual eserese na-diffused na nnukwu meziri … Na mgbede, niile floats na-illuminated, the Corso illuminates then the heart of Nice and the Nice Carnival.
udu: 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara A)/ 5€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B). A ga-ekwe omume nke ngwugwu 2 ihe ndị mere na ila – ewepu Saturday (1 ifuru Nme + 1 ngagharingosi Nme).
Nice ejị bụ otu ụdị ke ụwa na atụmatụ n'etiti ndị kasị ama nke French Riviera. Na nke ọ bụla n'elu mmiri, costumed ụdị otutu ruo 100.000 okooko osisi na-ekpo ọkụ nke ìgwè mmadụ.
udu: 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B). A ga-ekwe omume nke ngwugwu 2 ihe ndị mere na ila – ewepu Saturday (1 ifuru Nme + 1 ngagharingosi Nme).
N'oge Nice ejị On Ebe Masséna, na visual eserese na-diffused na nnukwu meziri.
ejị Nme – NISSARDA Kwụsịnụ
Le ejị Na na bụ akụkụ nke Nice ejị mee nke 18 floats e mere na afọ isiokwu ndị ọzọ ụmụ obere ihe oyiyi na a yi Nme na-egbuke agba, na òkè nke n'okporo ámá ụlọ ihe nkiri na music iche iche si n'ụwa nile.
udu: 21€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara A)/ 5€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B). Ekwe omume nke ngwugwu 2 ihe ndị mere na ila – ewepu Saturday (1 ifuru Nme + 1 ngagharingosi Nme).
1st Gay ejị na France
udu: 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara A)/ 5€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B). Ekwe omume nke ngwugwu 2 ihe ndị mere na ila – ewepu Saturday (1 ifuru Nme + 1 ngagharingosi Nme)
Nice ejị bụ otu ụdị ke ụwa na atụmatụ n'etiti ndị kasị ama nke French Riviera. Na nke ọ bụla n'elu mmiri, costumed ụdị otutu ruo 100.000 okooko osisi na-ekpo ọkụ nke ìgwè mmadụ
udu: 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B). Ekwe omume nke ngwugwu 2 ihe ndị mere na ila – ewepu Saturday (1 ifuru Nme + 1 ngagharingosi Nme).
Saturday 02 MACH – Mmechi nke Nice ejị
udu : 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B)
Saturday 02 MACH
Ejị Nme nke ìhè – Ere ọkụ nke EZE udu: 26€ na echekwabara aba / 12€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara A)/ 5€ n'ọnụ ụzọ (Mpaghara B)
Bilie gị ekike njikere N'ihi na Nice ejị niile na-ekpe ka eme, na-na-gị gbaa ụgbọ okporo ígwè zụtara Save A Train ! Ọ bụ oge ka a ejị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/nice-carnival/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Nice #Carnival #nicecarnival europetravel longtrainjourneys TrainStation ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel
Business Travel site Train, Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel UK, Travel Europe